Otu esi emepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe !! | Gam akporosis
Otu esi emepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe !!
Koodu QR bụ mmalite nke akara ngosi taa a na-ejikwa ya, ma ọ bụ ụlọ ọrụ, azụmahịa dị na mpaghara, ibe weebụ na isi ihe ọmụma. O zuru ezu ịnweta ekwentị mkpanaaka iji nyochaa ya ma ọ ga-akpọrọ anyị gaa ozi akọwapụtara na ịntanetị, mana ọ gaghị adị mkpa mgbe niile.
Taa ịmepụta QR code nwere ike ịme n'ụzọ dị mfeMaka nke a, enwere ibe ga-arụ ọrụ a maka anyị, na-egosi naanị ụzọ. Enwekwara ngwa iji mepụta QR ahaziri iche ma ha niile bụ n'efu.
Iji mepụta koodu QR a, ọ gaghị abụ sistemụ arụmọrụ doro anya, ị ga-enwe ike ịmepụta ya na ngwaọrụ gam akporo, Windows, Mac Os X, Linux, na ndị ọzọ. Enwere ike itinye ihe oyiyi na ụdị ụdị omenala a iji nye ya aka nke ụlọ ọrụ gị, ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa gị.
1 Otu esi emepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe
2 Koodu QR maka azụmahịa gi
Otu esi emepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe
Na nkuzi vidiyo nke Francisco Ruiz (@Pakomola) ọ na-eji peeji ahụ NGAN Ama, ọ dị irè maka Telegram, kamakwa maka ibe weebụ naanị site na ịbanye kpọmkwem URL. Ihe dị mma bụ na ị nwere ike ịmepụta koodu QR ọ bụla maka ozi ọ bụla ma gbakwunye ya na njedebe nke ntinye ọ bụla.
Ozugbo inwetara URL qr.tginfo.me, ọ na-egosi gị igbe ebe ị ga-abanye ọwa Telegram na @, otu ma ọ bụ URL. Anyị ga-emepụta akara ngosi QR nwere akara ngosi ọ bụrụ na ọwa ahụ nwere ya, ebe na URL ọ gaghị ekwe omume mgbe niile.
Have nwere nhọrọ nke nbudata QR code na kọmputa gị na- «Download», detuo adreesị, mee ka onyinyo ahụ pụta ìhè ma ọ bụ bipụta koodu ahụ iji tinye ya na ụlọ ọrụ gị, ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị. Emere ya ngwa ngwa na ngwa ngwa, ọ bụ ọrụ ga-aba uru maka onye ọ bụla.
Koodu QR maka azụmahịa gi
Ọ bụrụ na vidiyo natara ihe dị ka 100 mmasị na gọọmentị Androidsis YouTube, Francisco Ruiz kwere nkwa nkuzi banyere otu esi emepụta koodu QR maka azụmaahịa gị na-enweghị mkpa ịmepụta ibe weebụ. Dịka ọmụmaatụ, mepụta menu zuru oke ma nwee ike ịkekọrịta ya na mmanya, ụlọ oriri na ọ ,ụ restaurantụ, yana tinye ọnụahịa nke ebe a na-eme bred na azụmaahịa ndị ọzọ.
Koodu QR bụ usoro nke ụbọchị na ọhụụ ha ga-enye ndị ahịa ohere i scanomi ha ka ha lelee ndepụta ọnụahịa na-enweghị inye leta nkịtị, ihe a machibidoro iwu ugbu a. Site na QR TG Info ị nwere ike ịmepụta koodu QR nke gị n’ime ihe gbasara sekọnd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi emepụta koodu QR n'ụzọ dị mfe !!
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition na-egosi na ndị nrụpụta peeji nke
Emeela ka mwepụta nke Redmi Note 10 usoro maka ọnwa Machị